तस्कर संग सेटिङ मिलाउन नमानेपछि हत्या भएको खुलासा, ७ जना पक्राउ
कार्तिक ४ धनगढी । कैलालीको धनगढी नगरपालिका वडा नम्वर १२ अस्थाई प्रहरी बिटका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द बि.क. र प्रहरी जवान रामबहादुर साउँदको तस्कर संग तस्करीको लागि सेटिङ मिलाउन इन्कार गरेपछि हत्या भएको खुलेको छ ।
हत्या गर्ने तस्करको समूह मध्ये ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मंगलवार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
७ जनाले असई र प्रहरी जवानको हत्या गरेको स्विकारेको कैलालीका प्रहरी उपरिक्षक दिलिप देउवाले बताउनु भएको छ । हत्यामा संलग्न २ जना भने अझै फरार रहेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १० वस्ने ३१ बर्षिय पर्कु भन्ने रोहित राना, २० बर्षिय राजेन्द्र राना, ३० बर्षिय चोर भन्ने सुरेश राना, २५ बर्षिय गव्वर भन्ने राजकुमार राना,२२ बर्षिय रान निवास राना,२९ बर्षिय दलराम राना, वडा नम्वर ११ का २५ बर्षिय गोपाल राना रहेको प्रहरी उपरिक्षक देउवाले वताउनु भयो ।
तस्कर ७ जना बिरुद्ध ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्धा दर्ता भएको प्रहरीले बताएको छ । कैलालीका प्रहरी नायव उपरिक्षक प्रतिक बिष्टले योजनाबद्ध ढंगमा तस्करहरुले हत्या गरेको अनुसन्धानवाट खुलेको जानकारी दिनु भयो ।
तस्करीको सेटिङ मिलाउन नमानेर तस्करी रोक्न खोजेकाले असई गोविन्द र प्रहरी जवान साउँदको हत्या भएको खुलेको हो । अघिल्लो दिन पनि भारतवाट तस्करी गरि ल्याएको सुर्तीजन्य पदार्थ असई गोविन्दले बरामद गर्नु भएको थियो ।
कात्तिक १ गते बिहानै तस्करहरुको समूह अस्थाई प्रहरी पोष्टमा पुगेर असईलाई भटेर तस्करीका लागी सेटिङ मिलाउने कोशिस गरेको प्रहरीको एक उच्च अधिकारीले बताएका छन ।‘हत्यामा संलग्न यहि समुह बिहान प्रहरी पोष्टमा पुगेर तस्करी गर्नका लागी कुरा मिलाउन पुगेको थियो, असईले इन्कार गरिदिए ’उहाँले भन्नु भयो ‘तस्करी गर्न छुट नपाएपछि हत्या गरिएको खुलेको छ ।’
कसरी हत्या भयो
शनिवार राती ८ः३० बजे खाना खाएर असई गोविन्द प्रहरी जवान साउँद लाई मोटरसाईकलमा पछाडी वसालेर गस्तीमा निस्किनु भयो । एउटा घरमा मोटरसाईकल राखेर उहाँहरु धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० बनकट्टी घाटमा पुग्नु भयो ।
अस्थाई पोष्ट देखि करिव ५ किलोमिटर दक्षिण पश्चिम तर्फ पर्छ । तस्कर समान ओसार्ने वाटो नजिकै एउटा झ्याङमा असई र प्रहरी जवान वसिरहनु भएको थियो । राती १०ः३० बजेतिर भारततर्फ लैजान गोरुगाडामा मटर राखेर तस्करको समुह आयो । असई र प्रहरी जवानले गोरुगाडालाई रोकेर समान नियन्त्रणमा लिन खोजे ।
प्रहरी जवान गोरुगाडाको एकातर्फ र असई अर्को तर्फ उभिनु भएको थियो । शुरुमा उनीहरुले प्रहरी जवान र असईलाई पैसा दिएर समान छुटाउन कोसिस गरेको हत्यामा संलग्नको बयानलाई उदृत गर्दै कैलालीका प्रहरी उपरिक्षक देउवाले बताउनु भयो ।
समान छोड्न नमानेपछि गोरुगाडाका एकापट्टी रहनु भएका प्रहरी जवानलाई तीन जनाको समुहमा रहेका तस्करले टाउकोमा लठ्ठीले हिर्काए । जवान साउँद त्याहावाट अलि पर भाग्नु भयो । त्यसपछि अर्कोपट्टी रहनु भएका असई माथी पनि प्रहार गरियो । असईको फरुवाले हिर्काएर पहिले हत्या गरेको प्रहरी उपरिक्षक देउवाले बताउनु भयो । प्रहरी जवान साउँद उम्केर भाग्नु भएको थियो ।
तर तस्करको समुहले लखेट्दै गएर उहाँको त्यसपछि हत्या गरे । अलग ठाउँमा हत्या गरेपछि दुवै जनालाई उखुवारी छेउमा खाल्डो जस्तो ठाउँमा ल्याएर शुरुमा त्याहाँ जमिन मुनी गाड्ने प्रयास गरेको हत्यामा संलग्नले प्रहरीलाई बयान दिएका छन ।
जमिनमै खनेर गाडेपछि थाहा पाईहालिने देखेपछि उनीहरुले नदीको बिच भागमा खाल्डो खनेर गाड्ने सोच बनाए । शुरुमा प्रहरी जवानलाई नदीको बिच भागमा लगेर खाल्डो खनी गाडे । त्यसपछि त्यसको करिव ५० मिटर दक्षिण तिर नदीको बिच भागमा असईलाई खाल्डो खनेर गाडेको उनीहरुले बयान दिएका छन ।
नदीमा गाडेपछि उनीहरुले माटो खनेर ल्याएर रगतलाई नदेखिने गरी ढाकेका थिए । ‘घटनाको ढाकछोप गर्न सकेसम्म कुनै सवुत प्रमाण वाँकी नरहुन भनेर धेरै प्रयास गरेको देखिएको छ । उनीहरुले हत्या गरेपछि गोरुगाडामा राखेर मटर भारत पुगाएको बयान दिएका छन ।
हत्यामा संलग्न ७ जना मध्य २ जना सोमवार दिउसो र ५ जना राती पक्राउ गरिएको हो । हत्यामा संलग्न मध्यका २ जनाले नदीको बिच भागमा गाडेको स्थान देखाएपछि मंगलवार बिहान दुई दिन पछि प्रहरी जवान साउँदको शव फेला परेको प्रहरीले बताएको छ । हत्यापछि असईको पेस्तोल र मोवाईल नदीमा फालेका थिए । मंगलावर पेस्तोल पनि फेला परेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक उत्तम सुवेदीले तस्करीको समान नियन्त्रण लिदाँ तस्करको समुहले एकाएक फरुवा हानेर हत्या गरेको बताउनु भएको छ ।
असई सँग पेस्तोल थियो । तर उनले पेस्तोल समेत झिक्ने मौका नपाउदै आक्रमण भएको उहाँले बताउनु भयो ।‘पेस्तोल झिक्ने मौका नै पाएन, उनीहरुले जे हातमा छ, त्यसले एक्कासी प्रहार गरे’डिआईजी सुवेदीले भन्नु भयो ,‘फरुवाले टाउकोमा र घाँटीमा हिर्काएर हत्या गरेको बुझिएको छ ।’ असई गोविन्द र प्रहरी जवान साउँदको शव घाटी पुरै काटिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।